XYZtoCAD, AutoCAD - Geofumadas का साथ समन्वय कार्य गर्दछ
XYZtoCAD, AutoCAD सँग काम समन्वय
फेब्रुअरी, 2011 अटोक्याड-Autodesk, topografia, भिडियो
AutoCAD आफैंले निर्देशांकहरू प्रबन्ध गर्न वा पोइन्टबाट टेबुलहरू सिर्जना गर्न धेरै प्रकार्यहरू ल्याउँदैन। सिभिल थ्रीडीले यो गर्छ, तर आधारभूत संस्करणले गर्दैन, र त्यस कारणको लागि जब हामी कुल स्टेशन, जीपीएस वा स्ट्याक आउटबाट उत्पन्न निर्देशा with्कहरूसँग काम गरिरहेका छौं, हामीले म्याक्रोहरूको सहारा लिनुपर्दछ। त्यहाँ पानी खायो.
तर XYZtoCAD साधारण म्याक्रो होइन, यो कार्य तर्कको आधारमा निर्मित उपकरण हो, अनलाईन अपडेट गर्ने विकल्पको साथ। के हुन्छ त्यो यो छ किनभने यो नि: शुल्क छ, कसैले यसको सम्भावनालाई कम महत्त्व दिन सक्दछ, यस समयमा जुन खुला ब्रान्ड भन्दा राम्रो भएको छ, यसलाई स्थितिमा राख्न गाह्रो छ।
XYZtoCAD स्थापना गर्नुहोस्
कार्यान्वयन योग्य प्रोग्रामिंगआटोकैड डॉट कॉमबाट डाउनलोड गरिएको छ, त्यसपछि यो कार्यान्वयन हुन्छ र विजार्ड अनुसरण गरिन्छ। अन्तमा यसले हामीलाई सोध्छ कि कुन AutoCAD स्थापना हामी यसलाई सक्रिय गर्न चाहान्छौं। केहि केसहरूमा अन्तिम चरण देखा पर्दैन, र यो प्राय: प्रणाली रेजिस्ट्रीमा नराम्रो हिसाबले इन्स्ट्यान्स्टेन्ट लाइसेन्स भएको कारणले हुन्छ -वा पतित, तपाईं यसलाई कल गर्न चाहानुहुन्छ-
स्थापना समस्याको अवस्थामा, CADnet को साथीले निम्न सुझाव दिएका छन्:
1 स्वत: खोल्नुहोस् OpenCAD
2 तपाईं कमाण्ड लाइनमा लेख्नुहोस्: netload र त्यसपछि तपाई प्रविष्टि गर्नुहोला
AutoCAD 2010 -2011 को लागि फाईल चयन गर्नुहोस्
c: \_ cadnet \_ xyztocad \_ एप \_ R18 \_ xyztocad.dll
AutoCAD 2007-2008 -2009 को लागि फाईल चयन गर्नुहोस्
c: \_ cadnet \_ xyztocad \_ एप \_ R17 \_ xyztocad.dll
हामी देख्छौं, यो उपकरण 2007 बाट AutoCAD 2011 सम्म संस्करणहरूमा चल्छ र यो .NET सँग बनाइएको हो। हामी विचार गर्न सक्छौं कि यो पनि AutoCAD 2012 मा चलिरहेको छ कि केही महिनामा जारी गरिनेछ।
यस अवसरलाई तपाईलाई बताउनु होस् कि तपाईं स्वत: डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ AutoCAD 2012 निःशुल्क यो लिङ्क, परीक्षणको प्रयोजनको लागि बीटामा, तपाईले भर्खरै दर्ता गर्नु पर्छ।
XYZtoCAD मेनु सक्रिय गर्नुहोस्
एकपटक स्थापना भएपछि, यो कमांड लाइनमा सक्रिय हुन्छ
जब गरिरहँदा, छविमा देखाइएको एक नयाँ मेनु शीर्ष पट्टीमा देखा पर्दछ।
यदि हामी अब मेनु हेर्न चाहँदैनौं, यो आदेशसँग निष्क्रिय छ
यो सम्भव छ कि संस्करण स्थापना गर्दा त्यहाँ पहिले नै एक नयाँ छ, यो आदेश प्रयोग गरी अद्यावधिक गर्न सकिन्छ
एक्सेल बिन्दु आयात गर्नुहोस्
यस अनुप्रयोगले साधारण प्यानलमा आश्चर्य कार्य गर्दछ। Txt फाईल छनौट गर्नुहोस्, क्रम छ जसमा डाटा छ, यदि तपाईं पोइन्टहरू वा ब्लकहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने। पोइन्ट साइज, लेयर जहाँ तिनीहरू सुरक्षित हुन्छन् र त्यस्तै हो।
CADnet. मित्रका लागि मेरो आदर छ कि यो खिलौना संग चकित भएको छ।
त्यहाँ त्यस्तो बटनहरू छैनन् जुन डेटा अवलोकन गर्न एकको रूपमा छ, जसले तपाईंलाई तालिकालाई पूर्वावलोकन गर्न अनुमति दिन्छ जुन आयात भइरहेको छ। साथै विकल्प अवस्थित एक बाट पोइन्ट ढाँचा चयन गर्न।
र एकचोटि तपाईंले पोइन्ट्स कोर्नुभयो भने, टेबल सक्रिय गर्न बटन सक्रिय हुन्छ। यसको लागि माथिल्लो बायाँ कुनामा स्थान सating्केत गर्नु आवश्यक छ, तालिका शैली स्वीकार्दछ, धेरै उत्पादन हुन्छन् जहाँ धेरै छन् (प्रति पृष्ठ १०० पोइन्टहरू) र एक क्लिकको साथ तालिका उत्पन्न गर्दछ जुन ID, X समन्वय, Y निर्देशांक, उचाइ र कोण सम्मिलित छ। अर्को बिन्दु स्ट्याकआउटको लागि महान, यद्यपि मसँग ए angle्गल डेटाको उपयोगिताका बारे आरक्षणहरू छन्।
Txt मा बिन्दुहरू निर्यात गर्नुहोस्
उल्टो, यो उही हो। यो ब्लक वा पोइन्टबाट चयन गर्न सकिन्छ,aबाट पत्र वा संस्थाहरूको चयन। त्यसोभए हामीले हामी तिनीहरूलाई सूचीबद्ध गर्न चाहन्छौं, दशमलवहरूको संख्या, जहाँ txt फाइल भण्डारण र तयार हुनेछ।
अवश्य पनि, txt फाईल एक्सेलको साथ खोल्न सकिन्छ, अन्वेषकबाट भन्दा बढि केहि पनि होइन, तर एक्सेल प्रविष्ट गरेर सबै फाइलहरू विकल्प छनौट गरेर। त्यसो भए विजार्डले हामीलाई चरणबद्ध रूपमा चरणमा लिन्छ जबसम्म यो टेबलको रूपमा प्रदर्शन हुँदैन। त्यसरी नै, तालिकालाई अल्पविराम वा ट्याबहरू द्वारा विभाजित पाठको रूपमा बचत गर्न सकिन्छ, जबसम्म यो पहिलो पानामा हुन्छ र सँगै सेलहरू वा त्यस्ता अनौंठो चीजहरू हुँदैनन्।
म एक बटन द्वारा मारा गएको थियो जुन तपाईंलाई प्रक्रिया रोक्न अनुमति दिन्छ, यदि एक धेरै ठूलो अंकका साथ काम गर्न आवश्यक छ वा एक कार्य हो भने नियमित पर्खाइन्छ।
ठीक छ, त्यहाँ छ। AutoCAD को प्रयोग सर्वेक्षणको लागि उत्तम अनुप्रयोगहरूमा मैले देखेको उत्तम।
यहाँ तपाइँ YouTube मा लोड भइरहेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो GvSIG Fonsagua, पानी को डिजाइन को लागि SIG
अर्को पोस्ट AutoCAD 2012 कहिले?अर्को »
Rep जवाफ "XYZtoCAD लाई, AutoCAD सँग कार्य निर्देशांक"
मलाई थाहा छैन कि त्यो अनुप्रयोग ओटोसिड 2013 मा चल्छ
मैले AutoCAD सिविल 3D 2013 स्थापित गरेको छ, ट्यूटोरियल पछि लागेका तर मैले राम्रो परिणामहरू पाएनन्। यदि तपाईं मलाई बताउन सक्नुहुनेछ कि म कसरी XyzToCad काम गर्न सक्छु। धन्यवाद
धेरै राम्रो नाइट्स
कार्यक्रम उत्कृष्ट धेरै राम्रो कार्ड धेरै उपयोगी औजार छ, तर म निर्यात चाहिये ब्लक एक समस्या र यस समाधान हुन सक्छ म यो त्रुटि निर्दिष्ट तर्क मान्य मानहरू को दायरा बाहिर थियो प्राप्त गुण
सहमतिको लागि धन्यवाद
मई, 2012 मा
अब तपाईं XyzToCad v.2a को नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
01-अनुप्रयोगले एक्सेल फाइल, Txt, Xml, Html लाई डेटा निर्यात गर्दछ।
एक्सेल वा Txt फाइलबाट 02-अनुप्रयोग आयात डेटा।
03-यो एक्सेल प्रयोगकर्ताको मेसिनमा स्थापित गर्न आवश्यक छैन।
04-तपाईंलाई तपाईका विशेषताहरूको सूचीका सबै ब्लाकहरू निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ।
05-ले तपाईंलाई ठूलो गुणहरू आयात गर्न अनुमति दिन्छ (आईडी, विवरण, Z, आदि)
ब्लक विकल्प को लागी 06-फील्ड स्केल।
07 - ब्लक छविको साथ तालिका सेटिङ बाहिर उत्पन्न गर्दछ।
+ भिडियो XyztoCad v.2a
उत्कृष्ट स्थापना को बारे मा स्पष्टीकरण को लागी धन्यवाद।
भविष्य सुधारले मलाई ठूलो योगदान देखाउँछ।
यदि उनीहरूले बहुभुज निर्माणको विकल्पको बारेमा विचार गरे भने यो खराब हुने छैन। यसको मतलब, pline कमाण्ड थप्नुहोस्, जसले पोइन्ट्सको क्रममा एक polyline सिर्जना गर्दछ। यो धेरै नै महसुस भएको खाँचो हो, यद्यपि यो लागू हुँदैन जब तपाईसँग भएको आन्तरिक बिन्दुहरूको बादल हो तर हो, प्रयोगमा केही मानिसहरूले यस एप्लिकेसनलाई बहुभुजको परिधि आकर्षित गर्नका लागि दिन्छन्।
यदि स्थापना विजार्डको साथ समस्या छ भने, यो म्यानुअल रूपमा गर्न सकिन्छ, निम्न POST मा यो रूपमा संकेत गरिएको छ
कोणको सन्दर्भमा, कलम तालिकामा, यो सही हो
जुन अनावश्यक छ, डेटा ब्लकहरूको लागि वैध छ। (यो अर्को संस्करणमा परिमार्जित गरिनेछ)।
अर्को संस्करणको लागि सुधारको सन्दर्भमा निम्न हुन्।
- एक्सेल पानाबाट डाटा आयात गर्नुहोस् प्रत्यक्ष रूपमा (कम्प्युटरमा एक्सेल स्थापित गर्न आवश्यक छैन)
एक्सेल र एचटीएमएलमा निर्यात गर्नुहोस्
डाटा आयात फारममा आयात।
नमस्कार र धन्यवाद! लेखको लागि।